Face Book Knowledge, Information and News « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » Face Book Knowledge, Information and News
Face Book Knowledge, Information and News
Bill & Melinda Gates Foundation via Melinda Gates
As Melinda Gates says: "For me, it’s really simple, and I think this powerful video says it well: Women and girls are not the problem. They’re the solution."
She’ll join thousands of advocates at next week’s Women Deliver conference in Kuala Lumpur, the biggest event of the decade to focus on the empowerment of women and girls. Head here for more Women Deliver stories: http://gates.ly/124rVDk
After centuries of western dominance, the world’s centre of economic and political weight is shifting eastward. In our four-part series that givesarare insight into the country on the move, with history in tow. http://aje.me/12Bpvap
Even if current greenhouse gas emission pledges are met, the world is still set to warm up by over 2°C. How can MENA region countries help tackle this problem?
Unlike · · Share ·3minutes ago ·
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာဈေးတက်လာတဲ့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလဲ
ဒျေါလာစြေးတှေ ဘာကွောငျ့ တကျလာသလဲ
BBCBurmese.com မွနျမာ နိုငျငံမှာ တဈလ အတှငျး ဒျေါလာ စြေးတှေ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျး နီးပါး တကျလာ ပါတယျ။
Like · · Share · 53 · Share · 18 minutes ago ·
Kosoethan Sagaing ထုံးစံအတိုင်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်ကုန်ပြီပေါ့ဗျာ
Jerry Kyaw ထပ်တက်နိုင် ချေ များသလား ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်နိုင် လဲဗျ တက်ပီးရင်ပြန်မကျ တတ်ဘူး
Volunteering Solutions Official Fan PageGet the latest news and offers on our Twitter.. Follow us now http://www.twitter.com/volsolLike · · Share ·3· 20 minutes ago ·3people like this. Writeacomment…Options Myanmar Online News ကိုယ်ပျောက် ကင်းလှည့်ရေယာဉ် အသုံးပြုရန် အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန် ပြင်ဆင်Friday, May 24, 2013အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန် ရေတပ်တို့သည် မောင်းသူမဲ့ ကိုယ်ပျောက် ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များကို စတင် အသုံးပြုရန် ခြေလှမ်းပြင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ Eclipseဟု အမည်ပေးထားသော လှေငယ်များတွင် လက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီး အဓိကအားဖြင့် ပင်လယ်ဓားပြဂိုဏ်းများကို ဖြိုခွင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဆိုပါ ရေယာဉ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုထားသော နည်းပညာအရ ရေဒါဖြင့် နေရာရှာ ထောက်လှမ်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် ကိုယ်ပျောက်စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ခေတ်မီ မျိုးဆက်သစ် ကိုယ်ပျောက် တိုက်လေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုထားသည့် နည်းပညာကို ရေတပ်ကပါ ပြောင်းလဲလက်ခံ အသုံးပြုလာသည့် သဘောမျိုး ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စေညွှန်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဟု သိရှိရသည်။… အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ ရေယာဉ်များသည် ရေမိုင် (၆၀၀)မျှထိ ခရီးသွားနိုင်ပြီး (၁၀)ရက်ကြာအောင် လောင်စာဆီ မဖြည့်တင်းဘဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသီများက ယင်းတို့သည် ပထမဆုံးသော ရေတပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်မည့် မောင်းသူမဲ့ ကိုယ်ပျောက်ယန္တရားများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ (၃၅)ပေ အရှည်ရှိသော လှေငယ်များသည် သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်သန်းကာ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပင်လယ်ဓားပြများကို ခြေရာခံ ရှာဖွေမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိနေသည်။ စစ်အင်အားကြီး မဟာမိတ် နှစ်နိုင်ငံသည် ပထမဆုံးသော စက်ရုပ်ရေတပ်ကို တည်ဆောက်ရန် စိတ်ကူးယဉ်နေဖွယ် ရှိသည်။Roll Royceက ထုတ်လုပ်သည့် မြင်းကောင်ရေ (၅၀၀)အား အင်ဂျင်နှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားသော ရေယာဉ်ငယ်များသည် တစ်နာရီ မိုင်(၆၀)နှုန်း မောင်းနှင်ကာ (၂၄)နာရီပတ်လုံး လှုပ်ရှားနေနိုင်သည်။ ကိုယ်ပျောက် ဗုံးကြဲ လေယာဉ်တစ်စင်းနှင့်ရော၊ အသေးစား တိုက်သင်္ဘော တစ်စင်းနှင့်ပါ ပုံသဏ္ဍန် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည့် Eclipseတွင် 50 Calibre သေနတ် တစ်လက်နှင့် စက်အမြောက်တစ်လက် အပါအဝင် လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင် HDအရည်အသွေး မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ဗီဒီယို ကင်မရာလည်း ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရေယာဉ်များ၏ တန်ကြေးသည် တစ်စင်းလျှင် ပေါင်စတာလင် (၆၅၀၀၀၀)မျှ ကျသင့်မည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုရေတပ် သင်္ဘောငယ်များကို အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာများက အဘူဒါဘီတွင် စမ်းသပ် တီထွင်လျှက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ယခုလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူထားသည့် Al Seer Marineမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ ကိတ်သ်ဟန်ဒါဆန်က "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖန်တီးမှု လက်ရာက လုံးဝကောင်းမွန်ပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းပါတယ်။ အရွယ်အစားရော အမျိုးအစားကပါ စင်းလုံးချောပါပဲ။ အသုံးဝင်မှု စွမ်းရည်ကတော့ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ထိ Mission အရေအတွက် များများစားစားမှာ သုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ရုပ်ရေတပ်ဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လှေတွေမှာ ပါရှိတဲ့ ရေဒါတန်ပြန် ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ပုံကြောင့် ရေဒါနဲ့ ထောက်လှမ်းမှုကို လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ ရေတိမ်ရော၊ ရေနက်ပိုင်းမှာပါ သွားလာနိုင်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလည်း အဆိုးဆုံး အခြေအနေတွေမှာတောင် ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်"ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။Source: DailyMail PlanetSee moreLike · · Share · 3919 · 20 minutes ago · 39 people like this.19 shares Writeacomment…Options Music မြို့ တော် (မြန်မာသီချင်းများသာ)Phyu Sin ဝေါပေါ်ပြန်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ လက်ဆောင် သီချင်းလေးပါ…လက်ဆောင် (ယုန်လေး+ခွန်းဆင့်နေခြည်) Zay Lay, Su Thida,Yuya Kinnar,Phyu Sin တို့တောင်းထားတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ခွန်းဆင့်နေခြည်တို့ရဲ့ လက်ဆောင်သီချင်းပါLength: 4:31Like · · Share · 422 · 21 minutes ago ·
unfccc addedaphoto from 24 May 2013 to their timeline.
CC:iNet shinesaspotlight ona‘traditional knowledge and climate science’ toolkit from United Nations University. The toolkit provides access to articles, videos and other resources to help indigenous peoples, policy makers and others access research on climate change adaptation and mitigation.
Unlike · · Share · 51135 ·7hours ago ·
← Burma and Turkey: Obama’s Muslim Human Rights Double Standard	တရုပ်ပြည် မြောက်ဘက်ဇာတိ ဂိုဘီသဲကန္တရသား မွန်ဂိုများပင်ဖြစ်၏။ →